Waa kuma Bernie Sanders? - BBC News Somali
Waa kuma Bernie Sanders?
Mudanaha golaha senate ee gobolka Vermont ee dalka Maraykanka, Senator Bernie Sanders waa ninka ugu horeeya ee ay ku tartamayaan Hillary Clinton mushraxnimada xisbiga Demoqraadiga, waxaana uu helay guul la taaban karo ka soo hooyay gobolka New Hampshire. Hadaba waa kuma isagua?
(Bernie Sanders waxaa markii ugu horaysay loo doortay aqalka Maraykanka 1990/Reuters TOPCAT: Sanders_Sanders)
Bernie Sanders bishii May ayuu ku soo booday musharaxnimada. Ma aha nin u diiwaangashay xisbiga Demoqraadiga ee wuu madaxbannaan yahay, taasoo wargayska Politico uu ku tilmaamay "farsamo ahaan la ogol yahay balse aan caadi ahayn".
Qaar ayaa leh Mr Sanders ayaa hadda ah xiddiga ugu cadcad doodaha Demoqraadiga, waxay ugu yeerayaan “kacdoon siyaasadeed” iyo xakameeyaha maalqabeenada sar sare.
Mr Sanders wuxuu ku dhaxay Brooklyn, New York, waalidkii waa Yuhuud. Wuxuu mar sheegay in uu ku soo koray guri yar, taasoo ka dhigtay in uu noqdo nin ka warhaya isagoo da’ yar sida bulshadu u kala sarayso.
Wuxuu galay jaamacadda University of Chicago, sanadihii 1960-meeyadii iyo 1970-yeedii wuxuu ka qaybgalay dhaqdhaqaaqyadii looga horjeeday dagaalka laguna taageerayay xuquuqda rayidka (Civil rights) sida kii March 1963 ee ka dhacay Washington.
Wuxuu dalbaday xilligii dagaalkii Vietnam in loo aqoonsado in uu diiday dagaalka sababo la xiriira diintiisa iyo mabda’iisa. Inkastoo uu aad uga waynaa da’da askarta loo dirayay dagaalka, waana la diiday codsigiisa.
Mr Sanders, wuxuu galay siyaasadda 1971 markii uu u tartamay aqalka sare ee gobolka Vermont, isagoo u sharaxnaa xisbiga Liberty Union, waa xisbi salka ku hayay Shuuciyad, kana soo horjeeday dagaalka. Wuu waayay tartankaas iyo ololayaal kale oo uu ku raadinayay in uu noqdo guddoomiyaha gobolka.
(Senator Bernie Sanders wuxuu ka adkaaday Hillary Clinton oo mushraxnimada Demoqraadiga kula tartamaysa, gobolka New Hampshire/ AFP/Getty TOPCAT: Sanders_Hillary)
Sanadkii 1988 wuxuu guursaday xaaskiisa hadda, Jane O'Meara Driscoll, oo ah guddoomiyihii hore ee Koleejka Burlington College waxaana mar lagu tilmaami jiray "la taliyaha ugu sareysa" heerarkiisa siyaasadeed. Isku dar waxay dhaleen 4 caruur ah oo lamaanayaashii ay kala tageen u dhaleen.
Waxaa markiisii ugu horaysay loo doortay aqalka wakiilada 1990, wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee isagoon matalin xisbina guul taas la mid ah gaara muddo afartan sano ah. Wuxuu halkaa joogay ilaa uu u tartamay oo uu helay kursiga aqalka saree e snate-ka sanadkii 2007.
Ilaa markii ugu horaysay ee uu tagay Washington, Mr Sanders wuxuu si cad u dhaleeceeynayay siyaasiyiinta Jamhuuriga iyo kuwa Demoqraadiga ah in ay yihiin kuwa la haystayaal u ah deeqbixiyayaal qani ah iyo qaybo gaar ah, waxaana mararka qaar lagu tilmaami jiray Diqsi – wuxuu ahaa qof si joogto ah u ula dooda dadka awoodda haya. Wuxuu noqday mudanihii waqtiga ugu dheer ka shaqeeyay congress-ka.
2010, wuxuu magac ku helay in uu taagnaa oo uu hadlayay muddo sided saacadood iyo bar ah, isagoo isku dayaya in uu ka hortago ballaarintii siyaasadihii canshuuraha ee Bush. Mr Sanders wuxuu sheegay in ay ahaayeen siyaaso u faa’iidaynaya maalqabeenka, oo aan wax dan ah ugu jirin saboolka oo uga sii daraya farqiga dhinaca daqliga.
(Bernie Sanders wuxuu sheegay I guushiisa New Hampshire ay muujisay in dadku ay doonayaan isbadal dhab ah / Getty TOPCAT: Sanders_supporters)
Wuxuu noqday guddoomiyaha guddiga arrimaha dibedda ee xubnaha golaha senate-ka rug-cadaaga ah sanadkii 2013 wuxuun agacan ka gaystay wadaxaajoodyada siyaasadaha xisbiyada ka baxsan markii askartii hore ee dalka oo dhan ay ka cawdeen dib u dhaca iyo daryeelka aan ku filnayn. Wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ugu waynaa ee mucaaradka dagaalka Iraq.
Wuxuu aad uga helaa ammaanidda siyaasadaha hanti-wadaaga ee dalalka Nordic, sida daryeelka caafimaad ee caalamiga ah iyo fasax shaqo ay helaan waalidiinta cusub. Wuxuu taageeraa in hay’ada dowladdu noqdaan goob lacag la’aan ah oo laga helo waxbarasho sare.
Mr Sanders waxaa lagu dhaleeceeyay in uu u codeeyay maamulka haysashada hubka Maraykanka, oo ay ku jirto in uu ka soo horjeestay dhowr jeer oo sharciga la soo bandhigay, kaasoo dalbanayay in la baaro taariikhda iyo waqtiga qofka la baarayo oo uu sugo qofku in uu sugo waqti ilaa uu ka helayo qoriga uu iibsaday. Mr Sanders wuxuu iska difaacaa eedahaas, isagoo sheega in uu yihiin kuwo matalaya muhiimadaha gobolka Vermont oo uu matalo.